Flying Slime, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Zvekare tinokuratidza mutambo uyo kwenguva yakati rebei unowanikwa kurodha mahara kwenguva yakati rebei. Ino nguva tiri kutaura nezve Flying Slime, mutambo we2D mukati medu watinofanirwa kudzivirira vanocheka vanhu uye kuunganidza moyo yemweya kuti vavakezve dzimba dzavo. Uyu mutambo inotipa maviri emitambo modes. Kune rimwe divi isu tinowana nzira yekurarama mune iyo Slime inofanirwa kunzvenga vanocheka nekushandisa matombo emweya akaunganidzwa kuponesa shamwari dzake. Mune chipingamupinyi, Slime inofanirwa kuvakunda kuti vawane mwoyo yemweya kuti vavakezve dzimba dzavo.
Iwo maitirwo mumutambo uyu anogona kuita kunge akaoma pakutanga, asi mushure mechinguva, ngatisimuke kuti tivabate. Flying Slime inoenderana neIOS 6.0 kana gare gare uye inowirirana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch. Inotora zvinopfuura 70 MB pane yedu kifaa uye ichaita kuti tinakidzwe nemaawa mashoma emutambo ine rakasiyana dingindira kupfuura zvakajairwa pamwe neiyo Gameplay. Flying Slime inowanzo mutengo muApp Store ye 2,99 euros asi kwenguva yakati wandei tinogona kuikanda mahara zvachose kuburikidza neiyi link yawakasiya kumagumo kwechinyorwa.
Kubhururuka Slime Zvimiro
Inokwezva zano, yakanaka uye yakachena katuni dhizaini
Yakanakisa fizikiki mechanics kupunzika ruzivo
Nyore kuwana mutambo chiitiko chizere nematambudziko
Inosarudzwa sisitimu kuratidza kwako kubudirira
Yakabatanidzwa vhidhiyo sisitimu yekudzidza kubva kumatenzi madhigirii uye nekugovana mavhidhiyo neshamwari
Mhando dzakasiyana dzematanho: kurarama, kumhanya nhangemutange, uye kugadzirisa mapassword pazvipingaidzo
Koka shamwari kuzokwikwidza
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Flying Slime, yemahara kwenguva shoma